Saripika · Oktobra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Saripika · Oktobra, 2017
Tantara mikasika ny Saripika tamin'ny Oktobra, 2017
Nepal: Samy Manana Ny Androny, Antsoina Hoe “Kukur Tihar”, Ny Alika Tsirairay Avy
Azia Atsimo 31 Oktobra 2017
"Ny fanajana ny zavaboary tsirairay no fenitra fototra amin'ny angano Hindoa. Androany no andron'ny Alika ao Nepal. Mirary 'KukurTihar' sambatra (fanompoam-pivavahana amin'ny alika)"
Shina: Hetsi-panoherana Am-pilaminana
Azia Atsinanana 30 Oktobra 2017
Toa mitohy hatrany ny olan'ny mponina ao amin'ny tanànakely ao Huacao any ambanivohitra distrikan'i Minxing ao Shanghai. Nampiseho ny tatitra avy amin'ny fampitam-baovao tao tanibe roa taona mahery lasa izay fa rehefa niandry nandritra ny taona maro ireo mponina dia tsy mbola nahazo ny onitra tamin'ny fivarotana ny taniny
Fianakaviana Goatemalteka: Doña Maria
Amerika Latina 28 Oktobra 2017
Mipetraka am-pireharehana ao an-dakoziany i Doña Maria, fianakaviana matriarka araka ny hita eo amin'ny huipil (akanjo misy petakofehy) miloko fotsy.
Shina: Ao Beijing Ireo Pandas Olaimpika
Shina 27 Oktobra 2017
Toa miasa ao amin'ny Valan-javaboary Wolong ao Wenchuan, Sichuan, izay ivon-toeran'ny horohorontany tamin'ny volana lasa teo ilay bilaogera EastIsRed66 ao amin'ny sehatra famahanana bilaogy Sina.com ..........
Bilaogera Iraniana Miresaka Momba Ny Andro Manerantany Ho An'ny Vehivavy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Oktobra 2017
Voaràra mafy nandritra ny roa taona farany ny zon'ny vehivavy tao Iran. Nogadraina ireo vehivavy mpikatroka sasany, ary voaràra ny Zanan Magazine, gazetiboky malaza momba ny vehivavy. Maro koa ireo hafa niharan'ny herisetran'ny mpitandro ny filaminana noho ny fomba fiakanjon'izy ireo.
Azia Atsimo 21 Oktobra 2017
Raha ny marina, maneso momba ny laharampahamen'ireo Fikambanana Tsy Miankina maro i Khokon. ''Tena aleoko tanteraka miantso ity ho NPO'' (Non-For-Profit organization na Fikambanana Tsy Mitady Tombony Ara-bola).
Eoropa Afovoany & Atsinanana 15 Oktobra 2017
Ireo Fomba Fanahazan-damba Isankarazany Ao Japana
Azia Atsinanana 12 Oktobra 2017
Mahafinaritra ny olona sasany ny manaha lamba ao Japana, raha ny hafa kosa toa tsy mivaky loha momba ny fomba fanahazan-damba .
Bangladesh: Mankalaza Ny Andron'ny Tenin-dReny
Azia Atsimo 10 Oktobra 2017
Ny 21 no Ekush ho an'ny Bangla, ary midika faha-21 ny hoe Ekushey. Ao Bangladesh, 'Ekushey' dia mitovy dika amin'ny 'Ekushey Febroary' ihany, andro izay ankalazan'ny Bangla ny Hetsika mikasika ny Fiteny sady fanomezam-boninahitra ho an'ireo namoy ny ainy noho ny anarany tamin'ny faha-21 Febroary 1952.